အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Author Thu - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Author Thu
၄ ကနုတ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
မင်္ဂလာပါ Author Thu။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝီကီရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
Ninja⛧Strikers «☎» ၀၉:၅၂၊ ၈ မေ​ ၂၀၁၅ (UTC)
Hello. I want you, if you have time, to translate the introductory paragraphs of en:Nea Salamis Famagusta FC and create the article in my.wiki. Xaris333 (talk) ၁၅:၄၁၊ ၁၃ မေ​ ၂၀၁၅ (UTC)>
The article that you recently created, has been nominated for deletion due to spelling mistake in title. A new article with correct spelling was created here, and you can continue writting at there. Thanks, Ninja⛧Strikers «☎» ၁၆:၁၀၊ ၁၃ မေ​ ၂၀၁၅ (UTC)
ကနုတ် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
မင်္ဂလာပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဤသည်မှာ သင်ဖန်တီးလိုက်သော ကနုတ် စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားခြင်းအတွက် အသိပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း A3 အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော ဆောင်းပါး သည် အကြောင်းအရာ မပါရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြင်ပလင့်ခ်များ၊ ကဏ္ဍထည့်သွင်းခြင်းများ၊ "အခြားကြည့်ရန်" အပိုင်း၊ ခေါင်းစဉ်အား ပြန်လည် ရေးသားထားခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အုပ်စုအဖွဲ့တစ်ခုအား ခေါင်းစဉ်အရ ရည်ညွှန်းထားလိုခြင်း၊ အကူအညီ တွင် မေးမြန်းရမည့် မေးခွန်းများ၊ အပြန်အလှန် စကားပြောခန်းများ၊ တမ်းပလိတ် tag များ၊ နှင့်/သို့ ပုံများ သာလျှင် ပါဝင်သော ဆောင်းပါးတစ်ခု ဖြစ်နေခြင်း အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတိုများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Wikipedia:Stub ကို ကြည့်ရှုပါ။ ဆောင်းပါးများ၏ အကြောင်းအရာသည် ထင်ရှားအရေးပါမှုရှိရမည် ဖြစ်ပြီး စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ခိုင်လုံသော အကိုးအကားများ ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၅၈၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
ကဏ္ဍအသစ်တွေ ဖန်တီးနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုစရာလေးရှိလို့ပါ။ ကဏ္ဍအမည်တွေက ဖြစ်နိုင်ရန် အများကိန်း များ ဆိုတာလေး ထည့်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား။ (ဥပမာ Category:နိုင်ငံအလိုက် မြက်ပင်‎များ) ကဏ္ဍတွေဆိုတာက တူရာတွေကို စုထားတဲ့ သဘောဖြစ်နေတော့ အများကိန်းအမည်ဆိုရင် ပိုပြီး သင့်တော်တယ်လို့ ယူဆလို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက ကဏ္ဍတွေကိုလည်း တခြားဝီကီတွေနဲ့ interwiki လင့်ခ်ချိတ်လို့ရပါတယ်။ စာမျက်နှာတွေကို ချိတ်သလိုပဲ လုပ်သွားရုံပါပဲ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၁၅၊ ၁၆ မေ ၂၀၁၆ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုပဲ ထင်မိပါတယ်။ အနည်းကိန်းထားမိတာက ကဏ္ဍတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ ကဏ္ဍခွဲတွေရော၊ ဆောင်းပါးစာမျက်နှာတွေရော အားလုံးကို တစ်ခုတည်းနဲ့ ရည်ညွှန်းချင်တဲ့ သဘောနဲ့ပါ။ အများကိန်းနဲ့ ထားလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်နော်။ အခုပဲ ပြောင်းလိုက်တော့မယ်။Author Thu ၀၇:၂၀၊ ၁၆ မေ ၂၀၁၆ (UTC)
Ninjastrikers likes this. Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၄၃၊ ၁၆ မေ ၂၀၁၆ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Author_Thu&oldid=430169" မှ ရယူရန်
၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၇:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၇:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။